Madaxweynaha Shiinaha oo ku naalooday ‘cudud iyo ciidan’ - BBC News Somali
Madaxweynaha Shiinaha oo ku naalooday ‘cudud iyo ciidan’
Image caption Xi Jinping madaxweynaha Shiinaha
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa shirweynaha qaran ee xisbiga hanti-wadaagga ee dalkaasi ka sheegay in dalkiisa uu gaaray horumar baaxad leh, islamarkaasina helay awood aanan la loodin karin adduunka oo dhan.
Shirweynaha oo shanti sanaba mar la qabto ayaa waxaa ka qeybgalaya illaa 2000 ergo oo xisbiga talada hay aka socda, waxaana lagu soo xulayaa xubnaha golaha dhexe ee hoggaamin doona siyaasadda Shiinaha,
Kulankan oo ay albaabada u xiranyihiin ayaa shantii sanaba mar dhaca, waxaana ka soo baxa cidda dalka hogaamin doonta iyo jihada uu qabsan doono.
Shiinaha oo kordhinaya kharashka Milateriga
Xi ayaa hogaanka qabtay 2012kii, waxaana la filayaa in uu wali sii ahaado gudoomiyaha xisbiga.
Shirwaynahan oo sidoo kale lagu jeexo khariiradda lagu hagi doono Shiinaha shanta sano ee soo socota ayaa la filayaa in uu soo gabagaboobo toddobaadka soo socda.
Waxyar ka dib marka uu shirkaasi soo idlaado ayaa la filayaa in la shaaciyo guddiga sare ee ay ka go'do talada dalka ee loo yaqaanno PSC, kaas oo dalka hagi doona.
Madaxweyne Xi ayaa yiri "Horumarka baaxada leh ee aan ku gaarnay nidaamka shuuciya waxa uu qeexayaa in dalalka kalane ay heystaan dooq wanaagsan
Wuxuu hadlayay muddo 3 saacadood ah, wuxuuna sheegay in Shiinaha uu gaaray horumar baaxad leh, islamarkaasina taariikhda bini'aadamka ay ka qaateen kaalin lixaad leh.
"Waxaa lasoo gaaray xiligii aan doorkeena ka qaadan lahayn arrimaha caalamka, islamarkaasna muujin lahayn faa'iidada aan ugu fadhino ibnu aadamka" ayuu yiri.
Waxa uu xukunka qabsaday sanadkii 2012-kii, xiligaas oo wixii ka dambeeyay uu sare u kacay hormarka dalkaas, balse waxaa sidoo kale kordhay kaliigi talisnimada iyo faafreebka lagu sameeyay xoriyatul qawlka.
Dadka u dhuun duleela arrimaha Shiinaha ayaa sheegaya in madaxweyne Xi uu sii balaarsaday awoodiisii, islamarkaasina uu noqonayo hoggaamiyihii ugu awoodda badnaa ee Shiinaha soo mara tan iyo xiligii madaxweyne Mao Zedong.
Warbaahinta dowladda ee Shiinaha ayaa dhawaanahan qoreysay in nidaamyada dimoqoraadiyadda ee reer Galbeedka ay fashilmayaan, islamarkaasna shuuciyada Shiinuhu tahay xalka ugu wanaagsan.